मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत पाउँलान् ? यस्तो छ अंकगणित « News24 : Premium News Channel
मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत पाउँलान् ? यस्तो छ अंकगणित
काठमाडौं । आज (आइतबार) बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । त्यसका लागि प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशन बोलाइएको छ ।
बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आज (२४ असोज) प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशवराज पाण्डेका अनुसार आज मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ ।
पार्टी विभाजनसँगै बागमती प्रदेशमा एमालेका १३ सांसदले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेपछि शाक्य अल्पमतमा पर्नुभएको छ । दल विभाजन भएको मितिले ३० दिनभित्र सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीबमोजिम शाक्यले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । उहाँले गत भदौ २ गते नेपालकै पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीका रूपमा सत्तारोह गर्नुभएको थियो ।
वाग्मती प्रदेशमा सभामुखसहित १ सय ९ सांसद छन् । हाल प्रदेशसभामा एमालेका ४३ सांसद मात्र छन् । सरकार टिकाउन शाक्यलाई ५५ मत आवश्यक पर्छ । हाल विपक्षी गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र २३, नेपाली कांग्रेस २२, एकीकृत समाजवादी १३ र जनता समाजवादीको १ मत गरी ५९ जना सांसदले शाक्यलाई विश्वासको मत नदिने र नयाँ सरकार घोषणा गरिसकेका छन् ।
३ मत रहेको विवेकशील साझा पार्टीले यो सरकारलाई विस्थापित गर्न विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यत, गठबन्धनले भने विवेकशील साझालाई पनि आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गर्दै आएको छ ।
अछाम । अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–४ का विनोद शाहीको हत्या आरोपमा मेयर अम्बिका चलाउनेलगायत ३
काठमाडौं । सरकारले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक
काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसले निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको बारेमा छलफल शुरु
‘जनार्दन कि धनार्जन ?’ (तस्वीर)
महेश्वर के.सी. काठमाडौं । प्रतिपक्षी नेकपा एमालेनिकट भातृ संगठन युवा संघले बजेट निर्माण गर्दा बिचौलिया
देशभर बर्षाको सम्भावना
ओक्साका शहरको मेयरले गरे गोहीसँग विवाह
गाल्टिएर बने पिएसजीको मुख्य प्रशिक्षक
नेपाल-भारत सीमानाका बन्द
राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम पाँच टुक्रा